सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी, कति होला नयाँ उचाइ ? « Janata Samachar
सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी, कति होला नयाँ उचाइ ?
काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई विश्वकै शीर मानिदै आएको छ । सगरमाथाकै कारण विश्वमा नेपालको छुट्टै पहिचान र गरिमा छ ।
सगरमाथाको अहिलेसम्म मानिदै आएको उचाइ ८,८४८ मिटर छ । यो पछिल्लो पटक सर्वे अफ इण्डियाले सन् १९५४ मा मापन गरी कायम गरिएको सगरमाथाको उचाइ हो । त्यस यता हालसम्म अधिकारिक रुपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको थिएन ।
त्यसैले नेपाल सरकार आफैंले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ बाट नै सगरमाथाको उचाइ मापन शुरु गरेको थियो । झण्डै डेढ दशक लगाएर सरकारले उचाइ मापन कार्य सम्पन्न गरेको छ तर अहिलेसम्म नयाँ उचाइबारे केही जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन ।
सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य अहिले सम्पन्न भएर घोषणा गर्ने चरणमा आएपछि सरकारले सगरमाथाको औपचारिक रुपमा घोषणाको तयारी गरेको भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो’सरकारले पहिलोपटक आफ्नै स्रोतसाधानमा सगरमाथाको उचाई मापन गरेको छ । त्यो कार्य अहिले सम्पन्न भएको छ । अब हामी आफैले नापेको सगरमाथाको उचाई औपचारिक रुपमा घोषणा गर्ने चरणमा आइपुगेका छौं ।’
सन् २०१५ मा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण मुलुकको उत्तरी भूभागमा रहेका स्थानहरुको उचाईमा असर परेको तथ्य नापी विभागको अध्ययनले देखाएको थियो । सोही सन्दर्भमा सगरमाथाको उचाइ पनि थपघट भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यहीबीच नेपालले पहिलोपटक आफ्नै स्रोतसाधनमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो ।
सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्न बुधवारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्नका निम्ती स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयलयले आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्री अर्यालले सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्नका निम्ती स्वीकृति प्रदान गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृती प्रदान भइसकेपछि अब केहीदिनमा कार्यक्रम बनाएर औपचारिक रुपमा सगरमाथाको नयाँ उचाई घोषणा गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपती सि चिङफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सगरमाथाको उचाई सँयुक्तरुपमा घोषणा गर्ने सहमती भएको थियो । सोहीबमोजिम नेपाल र चीनका सरकारी टोलीले संयुक्तरुपमा काम गरेका थिए ।
ओलीको प्रतिगमनको निर्णयविरुद्ध राजधानीमा ओर्लियो मानव सागर(फोटोफिचर)
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले
ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध राजधानीमा मानव सागर (फोटोफिचर)
राजधानीमा शुक्रवार भइरहेकाे विराेध प्रदर्शनमा देशभरबाट हजाराैं कार्यकर्ताहरु सहभागी छन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण
नेपालको छवि बिगार्ने क्यानडा सरकारको एडभाइजरी, भ्रमणका लागि नेपाल असुरक्षित !
काठमाडौं । क्यानडा सरकारले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धुमिल बनाउने कार्य गरिरहेको खुलासा भएको छ
नेकपा स्थायी समिति बैठक, ओलीलाई साधारण…
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अहिलेसम्म भइका संघर्षका समिक्षा, भावि रणनीति तय गर्ने तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत…
देवर–भाउजू कहाँ जान यहाँ आइपुगेको भन्नेबारे केही खुल्न नसकेको प्रहरीले बताएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि ३७ हजार कर्मचारी…
विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी करारमा गणक तथा सुपरिवेक्षक भर्ना आवेदन आव्हान गरिएको बताएको हो ।
नेकपा स्थायी समिति बैठक, ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाइने !
राष्ट्रिय जनगणनाका लागि ३७ हजार कर्मचारी माग, अनलाइनबाट दरखास्त दिन सकिने